Zvokudhonza Matinji Zvinoita kusvira kunake – Tips to have Matinji Mahombe! – Makuhwa.co.zw
Musikana kubva ane makore anosvika 12 anoudzwa nenyaya yokudhonza matinji kuti
arebe kusvika pakubuda zvokuti ukakotama anoonekwa nokumashure. Kudhonza uku
kunotora nguva yakareba kuti zvinyotsoonekwa.
Ini handina kumboona musikana anopima matinji ake kuti aone kuti ari kukura here.
Geza maoko nemvura inodziya, wadaro bvisa bhurugwa wozora mafuta eVhasirina mumaoko
nepamatinji. Wochutanga kuakweva uchiti ukakweva wombobata wakakweva kwekanguva.
Ukahwa zvogwadzisa worega wokweva rimwe. Wodaro uchichinjanisa. Pakudhonza unodhonza pese kuzasi nokumusoro kwematinji ako. Ukangoda kudhonza pakati unongoreba ipapo chete zvosaita zvakanaka. Asi kune vamwe vanotoda SHAPE yakaita se Chipembenene
zvokuti akavhura makumbo ake murume anoona matinji akati rimwe uku rimwe uku akamira semapapiro achipembenene. Kana zvirizvo zvaunoda dhonza kumusoro nezasi worega pakati. Nokuti iwo agara akakura kuno kumusoro, saka mapapiro echipembenene
makuru ari kumusoro.
Zviri kwauri kuti unopedza nguva yakadii uchiita asi zvinoda kuitwa kuda katatu pazuva kana
kupfuura. Ukawanza, anokasirawo kureba. Kuna vamwe vekunyika dzezasi koenda kunaana
Namibia ne South Africa vanodhonza kusvika matinji areba kupfuura 20 cm. Kwedu hatisviki
ikoko tinongoda kuti arebe zvishoma kuda 3 or 4cm. Vamwe vanoti mafuta enzungu ndiwo ari mberi pakudhonzesa. Kuno kudhayasiporo unokwanisa kushandisa OLIVE OIL VIRGIN 1.
Akanaka pamatinji ako. Zvoda uchangobuda mushawa kana mubhavhu pamberi pari
Mukadzi anenge adhonza matinji chiziva kuti Matinji anodawo kuita seMboro iri mubhurugwa matinji anogona kushaisa mukadzi mufaro achifamba nekuti anogona kungobuda muthong usinga fungire.
Madzimai MATINJI anobatsirawo imi kunyanya panoitwa zvekusvirana, varume vanongodawo zvekubata chete asi kutaura chokwadi matinji anobatsira iwe muridzi.Ukanzwa munhu anoti BECHE iBECHE mumwe kunyaradzana nevamwe asi chokwadi tiri kudawo kubatsira vanoda Matinji.Hakuna MUSHONGA unokunda Matinji kuti Beche ridziye KUDHONZA MATINJI WAKURA.
Related Topics:Zvokudhonza Matinji